ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟီနိုးထရပ်ကားများ | ဟီနိုးထရပ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Hino Hino Dutro Hino Truck
Hino Dutro (Truck)	Price	-	250 L	XZU304M-1004875 , 2007Model, 4000CC, 10 Feet,	2Tons , Grade 3B, 283000KM	Car No.	-	Sati/…. Comp...
Hino Dutro (Truck)	Price	-	250 L	XZU304M-1007284 , 2008Model, 4000CC, 10 Feet,	3 Tons , 328000KM	Car No.	-	Sati/…. Company License (BG...
Hino Dutro (Truck)	Price	-	250 L	XZU414-1002740 , 2006Model, 4000CC, 14 Feet,	2 Tons , 406000KM , Grade 3B	Car No.	-	Sati/…. Company Li...
Hino Dutro (Truck)	Price	-	250 L	XZU304M-1004875 , 2007Model, 4000CC, 10 Feet,	2Tons , Grade 3B, 283000KM	Car No.	-	Sati/…. Company Li...
Price $	225lks $ Brand name	HINO Model DRUTO model year	2007 Engine NO4C turbo 4009cc Gear (auto/mnul)	Manual License BGO Ton	2tons Footage 12’ft Single/ double Double Wheel Fuel Type Dies...
ရှေ့လေး နောက်လေးဘေးကပ် (နောက်ကန်အကျယ်) / NO4C turbo engine/ 12ပေ /2 တန် / ကား-အင်ဂျင်အလွန်သန့်
10​ပေ 2တန်​ ​ရှေ့​လေး​နောက်​​လေး NO4Cအင်​ဂျင်​ 4000cc manual
ဟီးနိုး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
ဟီးနိုး ဆိုတာ ဂျပန် နိုင်ငံ အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တိုယိုတာ လက်အောက်က ကုမ္မဏီ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် များ သီးသန့်ထုတ်လုပ် ဖို့ အတွက် ခွဲထားတဲံ အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အိမ်စီး ကားများ လည်း ထုတ်ပါ သေးတယ်။ ဟီးနိုး မှာ အများစုက ဘတ်စ်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အလတ်စား နဲ့ အကြီးစား လုပ်ငန်းသုံး ကုန်တင်ယာဉ် များလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အရောက်များ လူသိ များတဲ့ ဟီးနိုး လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် အချို့ ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
ဟီးနိုး လူသိများ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
ဟီးနိုး ဒတ်ထရို လို့ အမည်ရတဲ့ ကား တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၃၇၀၀ စီစီ ၊ ၄၁၀၀ စီစီ ၊ ၄၀၀၀ စီစီ ၊ ၄၆၀၀ စီစီ ၊ ၄၇၀၀ စီစီ ၊ ၄၈၀၀ စီစီ ၊ ၅၃၀၀ စီစီ အစ ရှိသဖြင့် မျိုးစုံ ရှိပြီး အစုံ ဝင်ရောက် ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်ကို ဝင်တဲ့ မော်ဒယ်က ၂၀၀၄ ဝန်းကျင် များပြီး ဈေးကတော့ ဂရိတ် ကောင်းရင် သိန်း ၁၂၅ ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ အရွယ် အလတ်စား ကုန်တင်ယာဉ် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် မြို့ တွင်း အပြင် နယ် ခရီး ကုန် သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရေး တို့ မှာလည်း အသုံး ပြု နေကြတဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်မျိုး ကတော့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြု နေကြတဲ့ ကား ဖြစ်ပြီးတော့ ဟီးနိုး ဘတ်စ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အစုံအလင် ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ်လည်း ကြီးကြ ပြီး ၇၀၀၀ စီစီ အထက် တွေ အထိ ကို ကြီးကြ ပါတယ်။ ဘုရားဖူး လုပ်ငန်း တွေမှာ အသုံးပြု နေတာ ကိုလည်း မြင်တွေ့ ရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေး လည်း မနည်း ပါဘူး။ သိန်း ၅၀၀ လောက် ရင်းရင် ဂရိတ် အတော်လေး ကောင်းတဲ့ ဟီးနိုး ဘတ်စ်ကား တစ်စီး ကို ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ထဲမှာ Poncho, Liesse, Rainbow, Melpha အစရှိသဖြင့် အမျိုး အစား စုံစုံ လင်လင် ရှိပြီး ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်း တွေမှာပါ အသုံး တွင်ကျယ် နေတဲ့ ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟီးနိုး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် မြန်မာပြည် ဝင်ရောက် ပုံ
သူ့ကိုတော့ ကား အရောင်း စင်တာ တွေမှာ တင်တာ နည်း ပါတယ်။ အများစုက အော်ဒါ ပေါ် မူတည် ပြီးတော့ မှာပေး ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကား တွေ မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အများ ပြည်သူ သုံး ဘတ်စ်ကား သွင်း ဖို့ အတွက် အခွန် အခ သတ်မှတ် ချက် ကလည်း သာမန် ကားများနဲ့ မတူ ပါဘူး။ အသစ် ကော အဟောင်း ကော မှာကြ ပါတယ်။ ရန်ကုန် မြို့ တွင်း အသုံးပြု ရန် နဲ့ အခြား နယ် တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ မှာယူခြင်း ကလည်း ကွာ ပါ သေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ဟီးနိုး ဘတ်စ်ကား တစ်စီး သိန်း ၄၉၀ ကျော်၊ အလတ်စား ကုန်တင်ယာဉ် သိန်း ၁၂၀ ကျော် ကတော့လက်ရှိ ကာလ ပေါက်ဈေး ဖြစ်ပါတယ်။Motors.com.mm ကနေ ဟီးနိုး အမှတ် တံဆိပ် ထဲက လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် နဲ့ ဘတ်စ်ကား အမျိုး မျိုး ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ နိုင် ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Hino မော်ဒယ်